सभामुखका लागि टोपबहादुर रायमाझीको बलियो सम्भावना ! – Nepali news portal
सभामुखका लागि टोपबहादुर रायमाझीको बलियो सम्भावना !
१७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:५२ October 4, 2019 बुद्ध सन्देश संवाददाता
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुराचारको आरोपमा लागे पछि पदबाट राजीनामा दिए संगै नयाँ सभामुखको खोजि हुन थालेको छ ।
नेकपाकै बिभिन्न नेताहरुको नाम सभामुख पदको लागी चर्चा हुन थालेको हो । पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, नेता देव गुरुङ र अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम चर्चामा छ ।
चर्चामा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा हुँदा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख र एमालेबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुख चयन भएका थिए ।
तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाए पनि उपसभामुख नेकपाबाहिर पुग्ने निश्चित छ । संविधानले नै सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पक्षले तुम्बाहाम्फेलाई सभामुखमा अस्वीकार गर्ने संकेत गरेको छ । महरा पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख भएकाले फेरि यही पक्षको जोडबल छ ।
प्रकाशित शुक्रबार १७ असोज, २०७६ ### सभामुखका लागि टोपबहादुर रायमाझीको बलियो ###
दशैंको मुखमा बिजुली पुगेपछि गड्तीर क्षेत्र झिलिमिली